ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ Martech Zone
ငါတို့ဘာကြောင့်လုပ်ကြတာလဲ လိုအပ်ချက် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး? ဒီကိစ္စကဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့လူအများစုကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဖုန်း၊ မောက်စ် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတံခါးရှေ့သို့ရောက်ရန်အလားအလာမတိုင်မီဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အများစုသည်အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ကုမ္ပဏီများတွင်ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာရှိရမည်။
၀ ယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ငါတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသေချာစေရန်၊ အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ခံရရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ရှုမြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာကိုအချိန်မီနှင့်မှန်ကန်သောသတင်းစကားပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အစောပိုင်းဝယ်ယူမှုသံသယ၌ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးကုမ္ပဏီများစာရင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
B2B နှင့် B2C နယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးရှိစက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများကိုမှီခိုသည်။ လူမှုမီဒီယာ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းလွှာများနှင့်ဘလော့ဂ်များသည်အထက်ပါဇယားတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာအသုံးပြုသောထိပ်တန်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွင်တည်ရှိသည်။ အခြားအကြောင်းအရာများအနေဖြင့် infographics နှင့် video အပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာများသည်စျေးကွက်များအကြားလူကြိုက်များလာသည်။ Jomer Gregorio, CJG ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ခက်ခဲသောလျစ်လျူရှုမှု ၈ ချက်
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပိုပြီးထုတ်ပေးပါတယ် အဝင်အသွားအလာ သင့်ဆိုဒ်သို့
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုထုတ်ပေးပါတယ် နောက်ထပ် ဦး ဆောင်.
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတည်ဆောက် သဘာဝ link ကိုလူကြိုက်များ.
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ပါတယ် စျေးနှုန်းချိုသာ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံများထက်။
Hmmm …နောက်ဆုံးတစ်ခုကညှိရန်လိုသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ရေရှည်တွင်စျေးသိပ်မကြီးနိုင်သော်လည်းသင်လိုအပ်သည့်ပရိသတ်ကိုကြီးထွားစေရန်၊ သင်လိုချင်သည့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ဦး ဆောင်မောင်းနှင်မှုကိုအမှန်တကယ်စတင်ရန်အတော်အတန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်လိုအပ်သည်။ ဦး ဆောင်စီးဆင်းမှုများမကုန်မှီကျွန်ုပ်သည်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအရှုံးမပေးပါ။
Tags: ပရိသတ်အကျိုးခံစားခွင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်link တွေတည်ဆောက်ပါစျေးပေါတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးcjg ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကျိုးကျေးဇူးများစေ့စပ်ထားခြင်းခဲထုတ်ပေးသည်အဝင်အသွားအလာjomer gregorioလူကြိုက်များမှု link ကိုအတွေးခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုအတွေးရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး